Nsogbu nke Web 3.0 Nọgidere | Martech Zone
Nhazi, nzacha, nkpado, ichikota, ịza ajụjụ, ndenye aha, ịhazi, ịhazi, ịkọwapụta, ịkparịta ụka n'networkntanet, na-esote, nchịkọta, mmasị, tweeting, nchọ, ịkekọrịta, ibe edokọbara, ịkọ ala, ịsụ ngọngọ, ịhazi, ịkọwapụta, nsuso, ịkọwapụta… ọ bụ ezigbo ihe mgbu.
Mmegharị nke Weebụ
Web 0: N’afọ 1989 Tim Berners-Lee nke CERN na-atụ aro ịntanetị mepere emepe. Ebe nrụọrụ weebụ mbụ gosipụtara na 1991 na World Wide Web Project.
Web 1.0: Site na 1999 enwere nde weebụsaịtị na ndị ọrụ na-agagharị n'ụzọ bụ isi site na ọnụ na ndekọ aha dịka Yahoo!
Web 2.0: Site na 2006 enwere saịtị nde 85 mana saịtị mmekọrịta, wikis na mgbasa ozi mmekọrịta malitere ịkpa oke ebe ndị ọrụ nwere ike isonye na mmepe ọdịnaya.
Web 3.0: Site na 2014, ihe karịrị otu ijeri ebe nrụọrụ weebụ dị na sistemụ ọchụchọ na nkwukọrịta ọgụgụ isi, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na a haziri ya nke ọma ma kpọọ maka teknụzụ maka ndị ahịa, ndeksi, ma chọta ozi maka ndị ọrụ.
Web 4.0: Anyị na-abanye na usoro nke ọzọ nke wherentanetị ebe ihe niile jikọtara ya, sistemụ bụ mmụta onwe onye, ​​mkpa dị iche iche na nke kachasị mma, webụ wee banye n'ime ndụ anyị dịka nkesa ike mere ihe karịrị otu narị afọ gara aga.
M buru amụma na 2010 ga-afọ nke nzacha, nhazi onwe na njikarịcha. Taa, ejighi m n'aka na anyị eruola nso - anyị ka nwere ike ịnọ ọtụtụ afọ. Isi okwu bụ na anyị chọrọ ya ugbu a, ọ bụ ezie. Zụ na-anụzi ihe ntị.
A na-etinye mgbasa ozi mmemme, ọgụgụ isi, na mmụta igwe na igwe ojii iji gbalịa ịkwalite mkpa na ịtụle nkwukọrịta. Na esemokwu bụ na ndị a bụ teknụzụ niile nke ụlọ ọrụ na-achịkwa iji jikwaa nkwukọrịta na onye ọrụ njedebe. Nke a bụ nnọọ azụ… anyị chọrọ usoro ebe onye ọrụ nwere ike mfe ịchịkwa ozi ha nri na otú ha si na-azụ ya.
Google dị afọ iri abụọ ma bụrụ naanị otu search engine, naanị na-enye gị ogbi data edepụtara na isiokwu ndị dabara na ajụjụ gị. Ọ ga-amasị m onye wuru chọta engine esote… Ike gwụrụ m ịchọ, ọ bụghị? Olileanya, na ikpochi igwe nke teknụzụ olu ga - eme ka ihe ọhụrụ dị na mbara egwuregwu a - enweghị m ike ịkọ n’echiche ndị na - eri ihe ga - enwe ezigbo ndidi na - agbanwe site na ọtụtụ nsonaazụ iji chọta nke ha na - achọ.
Lọ ọrụ dịka Firefox, Google, na Apple nwere ike ịnyere aka. Site na ndabara nkwanye mgbasa ozi nwere ike na nwụnye, ọ na-etinye ọrụ dị n'aka onye ọrụ. Dịka onye na-azụ ahịa, o nwere ike ịdị m ka ọ bụ ntakịrị ihe ka m chọọ ka ndị ahịa na azụmaahịa kwụsị ị toa m ntị. Mana ọ bụrụ na adịghị m mkpa ma na-akpasu iwe, nke ahụ bụ ihe ha kwesịrị ime. Ndị na-ere ahịa ka na-adịkarị na ndabara izipu ozi ahụ na mmadụ niile wee kesaa ozi ahụ ma nụchaa ya.
GDPR nwekwara ike inye aka. Amaghị m ihe mmetụta ya bụ mbido GDPR ịbanye na ozi na ụlọ ọrụ, mana enwere m mmetụta na ọ bụ ihe na-agbawa obi. Ọ bụ ezie na m kwenyere na ọ dị arọ, ọ ga-eme ka ndị ahịa kacha mma n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị nwere nchegbu n'ezie banyere ozi ọ bụla anyị na-eziga, mgbe anyị na-eziga ya, na uru ọ wetaara atụmanya ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa - ejiri m n'aka na anyị ga-ezite ụfọdụ n'ime ha. Ma ọ bụrụ na etinyereghị ndị na-azụ ahịa, ha nwere ike ọ gaghị agbanye iwu nchịkwa dị arọ dị ka nke a.
Echere m na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ na-ege ntị ma na-emeso atụmanya na ndị ahịa nkwanye ùgwù ha kwesịrị, na-eme ka ha baa uru site na nkwukọrịta, ga-emecha bụrụ ndị mmeri nke Web 3.0. Ma ọ bụghị ya, anyị na-abanye n'ime Web 4.0 (Intanet nke Ihe) na-enweghị net nchekwa.
Tags: na-achịkọtaibe edokọbaraNkewana-anakọtaegwu alanzacha-esonụnhazina-eme ka ọ pụta ìhèndekaamasịnetwọkna-ajụnyochasiri ike nghọta web-ekere òkènhazinhaziịsụ ngọngọịkpadotweeting3 web3.0 web
Kedu ihe dị mma iji kwalite ozi ederede?
Mee 11, 2010 na 5: 55 AM
Agbalịrị m ịrụrụ gị injin nchọ. Kama ịdabere na kọmputa iji nyochaa data na-enweghị ahaziri nke dị gị mkpa, igwe nchọta ahụ dabere na netwọkụ mmekọrịta gị.
Isi okwu okike mepụtara uzo nke Frankenstein nke mgbagwoju anya. Ugbu a, ezughi obere obere azụmaahịa ka ha nwee weebụsaịtị, ha ga-enwerịrị usoro okacha ama SEO nwere ọdịnaya ha na metadata iji mee ihe na-amasị Google. Nke a bụ ara.
Olileanya teknụzụ oge kwesịrị ekwesị gụnyere nke m ga - enyere gị aka ịchọta * ihe ịchọrọ, mgbe ịchọrọ ya ma anyị nwere ike ịgbanahụ isiokwu hell.
Zaghachi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu. Achọghị m iji aha ụlọ ọrụ m ma ọ bụ weebụsaịtị m ziga gị spam. Ihe niile gbasara "opt-in".
Mee 11, 2010 na 9: 43 AM
Enweghi ike ikwenye na ị nyeghị m ihe ngosi 😉
Mee 11, 2010 na 4: 32 PM
Have nụla banyere Wolfram Alfa? (http://www.wolframalpha.com/) Nke ahụ bụ “chọta engine.”
Mee 13, 2010 na 7: 48 AM
Ndewo Cassie! Echere m na Wolfram bụ n'ezie nzọụkwụ dị mma!
Sep 30, 2010 na 10: 17 AM
Ekwenyeghị m kpamkpam. Ee, data dị ike ma ọ bụrụ na ị jiri usoro ịkọwapụta ọdịnala maka nsogbu asụsụ. Google na - eme nke a - na - ebute ogologo ọdụ nke nsonaazụ na ndị ọrụ nkụda mmụọ.
Ala ndị na-emepe emepe nke usoro iheomume na-eme ihe dị ukwuu na-emetụta ihe ọmụmụ karịa ihe a na-atụle na vidiyo.
More na-eso… Anyị na-arụ ọrụ na ya ugbu a.
Daalụ maka ikenye.